ဘဝမှတ်တိုင်: MTK Device တွေ USB Debugging On မထားလည်း Adb သိအောင်လုပ်နည်း
MTK Device တွေ USB Debugging On မထားလည်း Adb သိအောင်လုပ်နည်း
ကိုယ့်ဖုန်းမှာ USB Debugging ကို Enable လုပ်မထားခဲ့ရဘဲ Pattern Lock ကျတာပဲဖြစ်ဖြစ်.. တစ်ခုခုကြောင့် ဖုန်း Lock ကျသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ ဒီ Tool က အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်..
၁။ MauiMETA_3G Dowinload
၂။ MTK usb VCOM Driver ဒါကတော့ရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ...
၃။ Pattern,Pin,Passowrd ဖျက်ဖို့အတွက် Shaume or Rom Master or Other software
၂။ MauiMETA ကို install လုပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ....
၃။ menu bar ကနေ Option>Connect smart phone into META mode ကိုနှိပ်ပါ
reconnect button ကိုနှိပ်ပါ figure-1 ....
၄။ ပြီးတာနဲ့ ဖုန်းကို vol up ကိုနှိပ်ထားပြီး usb ကြိုးချိတ်လိုက်ပါ.. vol up ကိုမလွှတ်ပါနဲ့ ဆက်နှိပ်ထားပါ စက္ကန့်၂၀လောက်နှိပ်ထားလိုက်ရင်.. figure-2 ထဲကလိုပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင် ဖုန်းဟာ META mode ထဲရောက်သွားပါပြီ logo မှာပဲရပ်နေပါလိမ့်မယ်.....
၅. ဒါဆိုရင်တော့ Adb က သိမယ့်အနေအထားရောက်သွားပါပြီ.. Adb နဲ့ စစ်ကြည့်ရင် ဖုန်းကို သိနေပါလိမ့်မယ်... Adb သိပြီဆိုတော့ Adb နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အမျိုးမျိုး လုပ်လို့ရပြီပေါ့ဗျာ... သေချာအောင် PC Suite တစ်ခုခုနဲ့ စစ်ကြည့်ပါ.. အောက်က ပုံမှာတော့ Pattern Lock ဖြည်ဖို့အတွက် ROM master ကိုဖွင့်လိုက်တာ ဖုန်းကို Adb သိနေတဲ့အနေအထားပါ... Adb သိနေတော့ Pattern ကို တစ်ချက်ပဲ နှိပ်ပြီး ဖြုတ်လိုက်တယ်လေ... User Data တွေ မဆုံးရှုံးတော့ဘူးပေါ့...
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 11/03/2014 09:09:00 pm